Tuesday November 10, 2020 - 09:23:24 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Trump ayaa ku dhawaaqay in uu soo afjaray adeeggii uu xukuumaddiisa ka hayay xoghayaha gaashaandhigga Mark Esper wuxuuna u magacaabay Christopher Miller agaasimaha Xarunta ladagaallanka waxa loogu yeero Argagixisada ee Qaranka sii hayaha xoghayaha difaaca wuxuuna sheegay in amarkaas uu islamarkiiba dhaqangal noqday.
Trump ayaa qoraal uu kusoo qoray bartiisa Twitter-ka ku sheegay in Mark Esper shaqadiisii laga joojiyay "Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in Christopher Miller oo ah agaasimaha Xarunta Qaranka ee La-dagaallanka Argagixisada aan u magacaabo sii hayaha wasaaradda difaaca waana nin si weynna loo ixtiraamo" ayuu yiri Trump.
Warbaahinta Mareykanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay sheegaysay in Trump uu khilaaf kala dhaxeeyo wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha CIA-da islamarkaana uu damacsanyahay in uu casilo.
saraakiil sarsare oo katirsanaa xisbigiisa ayuu horay shaqada uga eryay waxaana kamid ahaa John Bolton lataliyihiisi amniga qaranka,Taksilaar wasiirkii arrimaha dibadda iyo tobanaan kale oo shaqada ku waayay hadallo ay Trump isdhaafsadeen oo kaliya.
Dhinaca kale saraakiil sarsare oo kamid ah mas'uuliyiinta aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo ayuu soo ritay cudurka Carona Virus arrinkaas oo sare usii qaadaya duullaanka caabuqa covid19 ee guriga cad.
Warbaahinta Mareykanka ayaa sooi werisay in laba kamid ah kaaliyeyaasha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu habeenkii la iclaamiyay guusha Joe Biden uu haleelay Carona Virus.
Warbaahinta dowladda ee NPR ayaa soo xigatay Coulter Baker oo ah sarkaal katirsan xafiiska Wasiirka Guriyeynta iyo Horumarinta Magaalooyinka, Ben Carson, isagoo sheegay in wasiirku uu laxanuunsanyahay Carona.
Sida laga soo xigtay shabakadda telefishanka ABC caabuqa ayaa xanuun daran dhaxalsiiyay jirka Carson oo 69 sano jir ah wuxuu u baahday in loo wareejiyo Isbitaalka Milatariga ee Walter Reed oo u dhow Washington, halkaas oo uu ku helay daaweyn muddo gaaban ah.
sidoo kale shabakadda NBC News ayaa soo warisay in lataliye kale oo Trump muhiim u ah laguna magacaabo David Bossi uu isna laxanuunsanyahay caabuqa Covid19.
Bossi oo 55 sana jir ah ayaa madax ka ah muxaafidka Citizens United Association, wuxuu Trump magacaabay dhammaadkii usbuucii la soo dhaafay isagoo madax ka ah kooxdiisii sharciga ee loo xilsaaray in ay dacwado ka furaan gobollo badan oo laga taageersanaa xisbiga Jamhuuriga balse la sheegay in doorashooyinkii ka dhacay lamusuq maasuqay oo lagu shubtay.
arrintan uu Carona kusoo ritay mas'uuliyiin sarsare ayaa imaanaysa xili uu Trump latiiraanyaysanyahay murugada kasoo gaartay guuldarradii doorashooyinka ee guushu ku raacday Joe Biden